R/W Kheyrow halkeed ka keentaa, yaase iska leh lacagaha aad bixiso? | SMC
Home WARARKA MAANTA R/W Kheyrow halkeed ka keentaa, yaase iska leh lacagaha aad bixiso?
R/W Kheyrow halkeed ka keentaa, yaase iska leh lacagaha aad bixiso?
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, oo si dadban ugu jira olole doorasho, ayaa todobaadkan waxa uu lacag ugu deeqay dib u dhiska buundada Baardheere ee gobolka Gedo.
Ma aha markii ugu horeysay ee ra’isul wasaaraha lacag bixiyo waxaa uu horay u siiyey qaar ka tirsan bulshada Galmudug iyo Koonfur galbeed si loogu dhiso garoomo iyo goobo kale.
Si aan u hubsanno halka lacagtaasi ka timid, ayaan la xiriirnay Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorshaynta iyo La-Xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee golaha shacabka, xubnaha guddiga waxaa ay xaqiijiyeen in aaney jirin meel lacagahaasu uu ra’isul wasaare Kheyre bixinayo ugu jirtay miisaaniyadda qaranka ee 2019.
Guddiga ayaa meesha ka saaray in guddigooda uu ka warqabo, oo lagu soo celiyey, waxaa ay balanqaadeen la xisaabtanka ra’isul wasaaraha iyo iney shacabka u soo bandhigi-doonaan halkuu ka keenay, iney lacagta tahay midda qaranka iyo mid jeebkiisa ah uu isku suuqgeynayo.
Lacagaha uu ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre bixiyey waxaa ka mid ah:
$227,167 oo uu ku baxday Dhismaha Garoonka Cabdullahi Ciise, Galkacyo, Mudug.
$220,000 Dhismaha Garoonka kubadda cagta ee Cawaale, Galkacyo, Mudug.
$150,000 Dollar oo lagu horumarinayo garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo, Bay.
$150,000 oo lagu bixiyey garoonka kubadda cagta ee Dr. Waaberi ee Xudur, Bakool
$317,000 oo dib loogu dhisayo Buundada Baardheere ee gobalka Gedo.
Previous articleGuddoomiye Mursal iyo dhigiisa Jabuuti oo gaaray Baydhabo
Next articleShirka qaxootiga oo maanta ka furmaya Switzerland